Wasiir Duur jaan: Sharci uun aan kuwada soconno haddaan nidhaa waxa dhici karta inaynu ku kala tegno, Beesha Ciise kuma qancin in maayerka Saylac laga haysto guurtiyeey !!!! | Harowo.com
Wasiir Duur jaan: Sharci uun aan kuwada soconno haddaan nidhaa waxa dhici karta inaynu ku kala tegno, Beesha Ciise kuma qancin in maayerka Saylac laga haysto guurtiyeey !!!!
Wasiir Duur jaan oo u waramaya labada ogole ee Somaliland iyo sida loogu dul shaxayo Gadabuursi
Wasiir Duur jaan: Beesha ciise kuma qancin in maayerka Saylac laga haysto guurtiyeey!!!
Danaynta ay beesha Ciise Somaliland danaynaysaana maanta sidii hore way ka wayntahay
Sharci uun aan kuwada soconno haddii aan nidhaahno waxa dhici karta inaynu ku kala tegno!!! Markaa sharciga waa in la baalmaraa mararka qaar !!!
Jabuuti waan kusoo wada hadalay imikana Gandihii ciise ee Diridhaba ayaa saylac imanaya, halkaasaa duqey Cabdiwaraabe hogaaminayo iyo Ciise kuwada hadli doonaa
Halkan Ka Dhageyso This post has been viewed 39 times.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.	1 Comment for “Wasiir Duur jaan: Sharci uun aan kuwada soconno haddaan nidhaa waxa dhici karta inaynu ku kala tegno, Beesha Ciise kuma qancin in maayerka Saylac laga haysto guurtiyeey !!!!”
February 18, 2013 - 2:02 am
Samaroonka waxaa laga rabaa isku duubnaan hadii la waayo taas oo hargaysa marba oday u dhuunta meel aad gaadhaysaan ma jirto ee bal qabsada.
Samaroon waa in ay UGAAS kooda talada u dhiibtaan.
Ta saddexaad waa in Salaadiintu ay iska daayaan qaybinta dadka. Waa in la raadiyaa Gabilay Suldaan Samaterna dadka hor kacaa waayo samater ma aha Suldaan Awdal iyo selsel ee waa Suldaan baha Samaroon Gabiley oo kaliya.
Zaylac oo in loo midoobaa Ugaaskiina loo yeedhaa.
Dhul hadiyad ma galo ee bal qabsana